Aix Arome Cafe Cafe - Dhizaini magazini
Svondo 18 Chikunguru 2021
Cafe Iyo Café ndipo apo vashanyi vanonzwa kubatana pamwe kwemakungwa. Yakakura yezai chimiro chakaumbirwa mukati kati yenzvimbo inoshanda panguva imwe chete sekiashi uye kofi kupihwa. Kuonekwa kweiyo Icon kune dumba kunofemerwa nerima uye rakaomarara rinotarisa kofi bhinzi. Kuvhurika kukuru maviri kumusoro-pamberi pemativi maviri e "bhinzi hombe" kunoshanda sosi yakanaka yemhepo uye mwenje wechisikigo. Café yakapa tafura yakareba senge boka re octopus uye mabhuru zvachose. Matenga anoratidzika kunge akasarudzika akarembera akafanana nehove pakuona kwemvura, ripples dzinopenya dzinobata zuva rakapora kubva kudenga rakachena.
Zita rechirongwa : Aix Arome Cafe, Vagadziri zita : One Plus Partnership Limited, Izita remutengi : Aix Arome Coffee Co. Ltd..
Chishanu 16 Chikunguru 2021